ယ်ယူရန် Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion (5173-46-6) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / အခြားသူများက / Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion
SKU: 5173-46-6. အမျိုးအစား: အခြားသူများက
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ, Estra-4 ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူရှိ 9-diene-3, 17-Dion (5173-46-6) ။
Estra-4,9-diene-3,17-Dion Powderလည်း Dienedione အဖြစ်လူသိများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုအတွက်မိတ်ဆက်ဘယ်တော့မှသော 19-nortestosterone အုပ်စုတစ်စု၏တစ်ဒြပ်, နှုတ်တက်ကြွဟို-အန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုး (AAS) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာဇန်နဝါရီလ 4,2010 အပေါ်အမေရိကန်တစ်ဦးထိန်းချုပ်ထားပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်လာခဲ့သည် dienolone.The မူးယစ်ဆေးတစ်ခု prohormone ဖြစ်ထင်သည်နှင့်တစ်ဦးဇယားအဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထိန်းချုပ်ထားတ္ထုများအက်ဥပဒေအောက်တွင် III ကိုဟို Steroid တစ်မျိုးခွဲခြားထားပါသည်။
Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion ကဗီဒီယို
Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion
အရောင်: အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အလင်းအဝါရောင် Crystalline
Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion သံသရာ
ဓာတုအမည်များ: Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion
နာမ်: Estra-4,9-diene-3; estra-4,9diene-3,17-Dion; Estradienedione; Trena; Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion ကုန်ကြမ်း; 4,9-Androstadiene-3,17-Dion; 4,9-ESTRADIEN-3,17-Dion; nordienedione; 4,9-ESTRADIENE-3,17-Dion; METHYLDIENEDIONE; 9-Estradien-3;
Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion အသုံးပြုမှု
Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion ဟာဟိုအေးဂျင့် Trenbolone မှဓာတုဗေဒအလားတူအစွမ်းထက်လိုလားသူ Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Tren တစ်ဦးလူကြိုက်များ over-the-counter ဟို Steroid တစ်မျိုး / လိုလားသူဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ Tren အဖြစ်ရည်ညွှန်းလေးကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်ပေါင်းများရှိပါတယ်အဖြစ် nomenclature အဖြစ် Tren, ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်:
Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion ကုန်ကြမ်း
Tren ဟာအလွန်အားကောင်းတဲ့ Non-methyl ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အအဆိုးသွေးပေါင်ချိန်, lipid တန်ဖိုးများကို, လက်စထရောအဆင့်ကို impact နိုင်ပါတယ်နှင့် endocrine system ပေါ်တွင် strain ထားမည်။ Tren တစ်ခုမှာကျဘက်ကို progestin သွေးဆောင် gyno သို့မဟုတ်တည်ဆဲ gyno ၏မီးတောက် ups ၏အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပုလင်းအကြံပြုသောက်သုံးသောမှာသံသရာအပေါ်, P-5-P ကို ​​run ဖို့အကြံပြုပါတယ်။ မီးတောက်-ups တွေ့ကြုံခံစားသူကိုအသုံးပြုသူ 150-250mg အကွာအဝေးသို့သောက်သုံးသောတိုးမြှင့်သင့်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion Trenbolone မှပြောင်းလဲခြင်းပြီးဆုံးတဲ့အခါ။ Trenbolone မျိုးဆက်ပွားတစ်ရှူး, ကြွက်သားနဲ့အဆီများတွင်လက်ရှိတိကျတဲ့ receptors ဖို့ချည်နှောင်ထားတဲ့အစွမ်းထက်ဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Trenbolone တစ်ရှူးပြိုကွဲ (Anti-catabolic) မှနိုက်ထရိုဂျင်မစင်လျော့နည်းစေသည်။ အန်ဒရိုဂျင် (virilizing) သက်ရောက်မှုမှဟို၏အချိုးအစား (ကြွက်သားအဆောက်အဦ) သက်ရောက်မှုဟို steroids တစ်ဘုံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Trenbolone မြင့်မားသောဟိုအချိုးရှိပါတယ်။ testosterone ၏ဟိုအချိုး 100 ဖြစ်ပါသည်, သို့သော် Trenbolone ရဲ့အချိုး 500 ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Estra-4 ၏အကျိုးကျေးဇူးများ 9-diene-3, 17-Dion ကုန်ကြမ်းပါဝင်နိုင်ပါသည်:
•ကြွက်သား Mass တိုးတက်စေနိုင်ခြင်း
• Decrease ခန္ဓာကိုယ်အဆီ
4-diene-9, 3-Dion, Estra-17 ၏သောက်သုံးသောကဘာလဲ
Estra-2 တစ် 4-4 တပတ်သံသရာ, 9-diene-3, 17-Dion ကုန်ကြမ်းအကြံပြုသည်။ အဆိုပါပုံမှန်ထိုး 20-30mg / နေ့ဖြစ်၏။
Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion လေ့ Epistane နှင့်အတူ stacked ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကသင်၏ 1st သံသရာ အကယ်. သင်သည်မည်သည့်အခြားအ prohormone နှင့်အတူ Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion ကုန်ကြမ်း (Tren) သီးနှံများကိုပုံမရသင့်ပါတယ်။
Estra-4, ပေမယ့်, 9-diene-3, 17-Dion (Tren) တစ်ဦး Cycle ပံ့ပိုးမှုသင်သည်သင်၏သံသရာကာလအတွင်းတွေ့ကြုံခံစားစေခြင်းငှါမဆိုအလားအလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုထေမိရန်ကူညီပေးသည်ယူပြီး Non-methyl ဖြစ်ပါတယ်။
Post ကို Cycle ကုထုံး (ရာခိုင်နှုန်း) ထုတ်ကုန်သင့်ရဲ့သဘာဝက testosterone ဟော်မုန်း restore နှင့်သင့် hard-ရရှိခဲ့သည်ကြွက်သားကိုထိန်းသိမ်းကူညီပေးသည်။
အဆိုပါ Estra-4 ထံမှအချို့ကမှတ်ချက်ပေး, 9-diene-3, ဖိုအဖြစ် 17-Dion ကုန်ကြမ်းအသုံးပြုသူများက:
"သင်အစှမျးသတ်တိအကျိုးအမြတ်နှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရလိမ့်မယ်, ငါထွက်မြှောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ဘူး, ကျနော်အမှန်တကယ်အချို့သောအဆီရရှိခဲ့ (သို့သော် 6000 ကယ်လိုရီအစားအသောက်များတွင်ပြုပါမည်ဟုအဘယျသို့ Hacking ကို) ။ ဒါဟာအချို့သံသရာထောက်ခံမှု / သံသရာကူညီရန်နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချို့အပို hawthorn berry သီး add ရ, သွေးဖိအားကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပါလိမ့်မယ်။ ငါ6/ 100 / 100 / 100 / 100 / 150 မှာ 150 ပတ်သတ္တုတွင်းပွေးငါ "100mg နေချင်ပါတယ်
ဘယ်လို Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion အကျင့်ကိုကျင့်
Dienedione (Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion) 17b-hydroxy-estra-4,9, (10) -dien-3-One (dienolone) အဖြစ်လူသိများနေတဲ့ Steroid တစ်မျိုးမှပြောင်းပေးကြောင်း non-methylated Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
dienedione (Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion ကုန်ကြမ်း) က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အချို့သောဟိုလှုပ်ရှားမှုရှိနိုင်ပေမဲ့, က 17b-HSD နှင့်အတူအပြန်အလှန်အားဖြင့် dienedrone ဖို့ဘာသာပြောင်းထံမှ၎င်း၏ဆိုးကျိုးများအများစုရရှိသွားတဲ့။ ဒါဟာအလုံးစုံသက်ရောက်မှုတစ်နေရာရာမှာ trenbolone နှင့် nandrolone အကြားရှိပါတယ် steroids ။
က testosterone ဟော်မုန်းမှဓာတုဗေဒနှင့် pharmacologically ဆက်စပ်ဖြစ်ရန်အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးစတင်အာဏာတည်အေဂျင်စီများကပြသခဲ့ပါတယ်အဖြစ် Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion, အဆိုပါဟို steroids ထိန်းချုပ်ရေးအက်ဥပဒေ 2004 တစ်ခုအောက်တွင်ဟို Steroid တစ်မျိုးအဖြစ် US မှာခွဲခြားခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကြောင့်ဇန်နဝါရီလ 4, 2010 အပေါ်အမေရိကန်တစ်ဦးထိန်းချုပ်ထားပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်လာပြီးနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထိန်းချုပ်ထားတ္ထုများအက်ဥပဒေအောက်မှာဇယား III ကိုဟို Steroid တစ်မျိုးအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်
Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion ကုန်ကြမ်းစျေးကွက်
Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion မဆိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှုရှိပါသလား
တစ်ဦး 19-မဟုတ်သလိုဒီဒြပ်ပေါင်းလက္ခဏာတွေ gyno ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရသောလျောက်ပတ်သော progestational သက်ရောက်မှု, လိင်စိတ်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ရန်လိုစိတျအပွောငျးအလဲရှိပါတယ်အဖြစ်။ ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝအအီစထိုဂျင် blocker ဖြစ်သောသံသရာ, စဉ်အတွင်း DHT အဆင့်ဆင့်အန်ဒရိုဂျင်အာနိသင်ကင်းမဲ့ဆင်း-ထိန်းညှိသောကွောငျ့ gyno ဒီဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်အကြောင်းရင်း၏တစိတ်တပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာနေဆဲအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်ပေမယ့် Dienedione, အီစထိုဂျင်မှပြောင်းမထားဘူး။ ဒီဒြပ်ပေါင်း 17aa အသည်းအဆိပ်မဟုတ်သောကွောငျ့ကယ့်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကအခြားအချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပေမယ့်သို့သော်အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်, သံသရာစဉ်အတွင်းမွငျ့မားအသည်းအင်ဇိုင်းတန်ဖိုးများကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ။
အသုံးပြုသူများသည်များသောအားဖြင့်ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာပြီးနောက်သိသိသာသာကိုယ်အလေးချိန်အမြတ်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အစှမျးသတ်တိနှငျ့ကျူးကျော်အတွက်လျင်မြန်စွာအကျိုးအမြတ်, ခံစားရသည်။ ရလဒ်ယေဘုယျအား progestational သက်ရောက်မှုကြောင့်သာအသေးအဖှဲဖောင်းနှင့်အတူမျှမျှတတပိန်ဖြစ်ကြသည်။
Dienedione တစ်ဦးကို standalone အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လိင်စိတ်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် gyno တားဆီးဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုမှာ, သံသရာစဉ်အတွင်းခြီးမွှောကျ DHT အဆင့်ဆင့်ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးဖို့ testosterone ဟော်မုန်းသို့မဟုတ်ယင်း၏ Non-aromatizing metabolites တဦးနှင့်အတူ stacked နိုင်ပါသည်။
AASraw ထံမှ Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို
Estra-4, 9-diene-3, 17-Dion ကုန်ကြမ်းချက်ပြုတ်နည်း